ज्योति मगरकाे केहि अापत्तिजनक तस्विरहरू… अन्तरबस्तु छर्लङै हुने यस्ता पोसाक किन लाईन्? – PathivaraOnline
Home > गसिप > ज्योति मगरकाे केहि अापत्तिजनक तस्विरहरू… अन्तरबस्तु छर्लङै हुने यस्ता पोसाक किन लाईन्?
admin September 28, 2018 गसिप, मनोरञ्जन 0
काठमाडौ । ज्योति मगर सँधै चर्चामा रहिरहने मोडेल तथा गायिका हुन् । उनी आफ्नो स्वस्थ शरीरलाई छरपष्ट पार्न कत्ति लगाउँदिनन् । भन्ने ले त अस्लिल हर्कतपनि भन्छन् तर लुकीलुकी भएपनि उनलाई हेर्नेहरुको संखया भने काम छैन । उनका तस्विर र भिडियो हेर्नेको संख्या लाखौँ लाख पुग्दछ । कारण हो उनका शरीरका सबै अंक स्वस्थ देखिनु । आकर्षक बन्नु । र देखिनेगरी पहिरनको छनोट गर्नु नै हो ।
हुनत आधुनिक विश्वमा विश्वका टप सेलिब्रेटी भनिएकाहरु ज्योति जति मात्र छैनन् । उनीहरुको परिवेशमा सहन सकेरै होला । उनीहरुको सकारात्मक चर्चा छ । तर हाम्रोमा नकारात्मक छ । उनका तस्विर हेर्नेहरुको संख्या कम छैन । सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भइनै हाल्छ । तर केही नकारात्मक टिप्पणीपनि गरिन्छ । उनका अधिकांश गीत हेर्ने हो भने आधा शरीरपनि छोपिएको हुन्न । यतिमात्र हैन त्यस्ता गीत सुटिङ्गका क्रममा सुटिङ्ग स्पट नजिक रहने सबै लाजले आच्छु आच्छु हुनेगरी ज्योति प्रस्तुत हुने गर्दछिन् । केही सुटिङ्गका क्रममा खिचिएका तस्विरहरु यस्ता छन् ।
रोल्पाको नुवागाउँमा जन्मेकी ज्योति मगर हाल काठमाडौँ काँडाघारीमा बस्छिन् । पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेकी उनी दर्शकमाझ गायिकाका रुपमा ‘उही मूलाको सिन्की उही मूलाको चाना’बाट चर्चित भएकी हुन् । ज्योति मगर लोक गायिकाको रुपमा परिचित नाम हो । उनी विभिन्न कारणले बेलाबेलामा विवादमा पनि आउने गर्छिन । विशेष गरी गायिकाका रुपमा आफ्नो छवी बनाएकी मगर स्टेज कार्यक्रमहरुमा आफनो नृत्य पनि प्रस्तुत गर्छिन् । उनी बेलाबेला छोटा लुगा र आफ्नो बोल्ने शैलीका कारण विवादमा मुछिन्छिन् ।
हट र सेक्सी हुनु उनको शोख भएको उनले समय समयमा भन्ने पनि गरेकी छन् । उत्तेजक नृत्यसँगै गीत गाउने ज्योती भनेपछि युवा हुरुक्कै हुन्छन् । भल्गर प्रस्तुति भनेर उनको आलोचना सर्वत्र छ । भलाई भल्गर भन्छन् भनेर उनी आफैं भन्छिन ।
स्टेज चढेपछि सेक्सका कुरा भन्न नविर्सने ज्योति बेलाबेलामा सामाजिक सन्देश पनि बाँड्छिन् । सचेत पनि गराउँछिन् तर प्रस्तुति भल्गर नै हुन्छ । तै पनि उनको क्रेज भने बढ्दो छ ।
बलेको आगो सबैले ताप्छन ज्योतिको यो क्रेज अनि यो भल्गर कहिले सम्म टिक्छन रु यो भने भविष्यमा देखिने छ ।
अबदेखि मलेसिया काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूका लागि अायो यस्तो खुशीको खबर
मेरो यौ”नीबाट सेतो पानी धेरै बग्छ, के गरम त
गुडिया’ झैं देखिने जसिता गुरुङ, हेर्नुस् १२ ‘बोल्ड’ तस्वीरमा
अपार्टमेन्ट भित्रै काेराेना देखिएपछि सनसिटी बस्ने बेनिशाकाे यस्तो छ कुरा!